Sunshine Coast Mudjimba Beach Private Indawo yokuhlala - I-Airbnb
Sunshine Coast Mudjimba Beach Private Indawo yokuhlala
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguFay And Ross
Le ndawo yokuhlala yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla ngexesha lokuhlala kwakho Emva kokungena ngesango elikhulu qhubekela ekungeneni kwakho kwe-Air BnB kunye nendawo yabucala, ungene kumgangatho ogqunywe ngokuyinxenye onetafile yangaphandle kunye nezitulo zeGas BBQ kunye neRingi yegesi yokupheka.
Ngena ngomnyango wendawo yakho yokuhlala. I-air conditioning efakwe ngokupheleleyo kunye neefeni zesilingi ibhedi enkulu. Plus Ibhedi yeSofa Yeyabantwana abancinci kuphela
Ikhitshi inebhariji yemicrowave yetoasta ijagi eshushu isitya sekofu umatshini wokuhlamba isinki iipleyiti zokusika iikomityi zeglasi.
IBhafu ye-Spa yentsimbi kunye nebhodi yoku-Ayina Izixhobo zokuhlamba iinwele zokomisa iinwele
Umabonwakude weWiFi kwiNetflix YouTube YouTube
Ngena ngomnyango wendawo yakho yokuhlala. I-air conditioning efakwe ngokupheleleyo kunye neefeni zesilingi ibhed…
“Ikhaya lethu kuhambo olufutshane ukuya elunxwemeni kunye neendawo zokudlala zabantwana zokutyela ezikufutshane nezoThutho zoLuntu”
- Fay And Ross, umbuki zindwendwe wakho
4.96 (iingxelo zokuhlola 271)
IMudjimba yindawo ezolileyo kakhulu yokuphumla. Ulwandle lumalunga neemitha ezingama-800 ukusuka kwikhaya lethu
Ungayonwabela i-BBQ kwipaki ekufuphi noLwandle okanye utye kwiindawo zokutyela ezahlukeneyo.
Iikhosi zeGalufa kunye neepaki zamanzi zikufuphi
I-Mudjimba imalunga nombindi phakathi kweCalondra neNoosa
Isikhululo seenqwelomoya iSunshine Coast yimizuzu emi-5 xa uqhuba
imizuzu eyi-3 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Fay And Ross
UFay And Ross yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mudjimba